15 Twitter-yada xisaabiyeyaashu waxay raacayaan ... sannad ka dib - Geofumadas
15 Twitter-yada xisaabiyeyaashu waxay raacayaan ... sannad ka dib
Mee, 2013 Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
Sanad ka dib kormeerka xisaabteeda Twitter-ka, waxaan soo cusbooneysiinnay wixii dhacay. Jaantuska kuma jiraan labadii xisaab ee hore, sababtoo ah heerkoodu wuxuu saameynayaa aragti isbarbardhiga.
Laba ka mid ah xisaabiyayaashu ma soo laabanayaan noloshooda, inkastoo ay muhiim u yihiin wakhtiga isbarbardhigga koowaad. Falanqaynta soo socota waxaan ku dari doonaa xisaabaadyada kale ee koray si joogta ah, si deg deg ah ayey maskaxda ku haysaa @mappingGIS in waqtigan 1,110 uu haysto kuwa raacsan, in ka badan kuwa haysta qaar ka mid ah xisaabyadan oo aan kormeernay. Maqaalka asalka ah
Tartan yar oo Twitter ah ayaa soo gashay meel bannaan oo aan ku habboonayn sida habka is-difaaca uusan u daboolnayn si isku mid ah, khaasatan mowduucyada kooban, xiriirka iyo macluumaadka wakhtiga dhabta ah. Iyadoo la siman ama ka xun xun ee uur-ku-socdo wakhti ka dib maalmo dhowr ah, laakin fulinta kaalin muhiim ah faafinta mawduucyadaiyo maamulka maareynta. Waa kuwan liiska xisaabaadka aagga juqraafi ee la raacayo; Qaar ka mid ah macnahoodu waa kala duwanaansho, kuwa kale waa xisaabo ku dar mawduuca.
Waxay waxaa kaalinta sida ay dadka taabacsan, April 2012, labada ugu horeysay lagu soo qaado ku dhowaad 50 30,000% wadarta dadka taabacsan oo ka dhigan xisaabaadka 15. La cusboonaysiiyay midab cas ilaa bisha Agoosto ee 2012, waxaanan ku soo daray liis ay ku jiraan taageerayaasha inta badan ku koray bilihii 5.
Jadwalku ma badalo laakiin waxaa la ogaan karaa in goobaha qaar ay leeyihiin koboc tartiib ah kuwa ugu caansan sida URISA, Comunidad IGN iyo CamptoCamp. Joogitaanka maxbuusku u muuqato mid aan la heli karin. Laga soo bilaabo taariikhda magenta ilaa Diisambar 2012.
Jaangooyadu waxay ku taallaa dhinaca sare, waxay ka muuqataa in PortalGeografos, Mapping Magazine iyo CamptoCamp ay mar kale bedesho booska. Iyo sababo la yaab leh, Vector_One looma heli karo kaddib marka la abuuro LMA.
Koontada Mawduuc Kuwa raacaya % + 5 bilood+ 8 bilood
@gisuser Isticmaalaha GIS War saxaafadeedka warbaahinta ee dhexdhexaadinta. 8,645 9,863 11,125 29% + 1,218 + 1,262
@MundoGEO GEO World Macluumaadka bogga internetka, dhacdooyinka iyo joornaalada ee dhexdhexaad ah. 6,634 7,482 8,057 22% + 848 + 575
@Esri_Spain Esri Spain Esri's rasmiga ah ee Spain 2,245 2,579 2,943 7% + 334 + 364
@spatialsustain Joogitaanka Joogta ah Jariidada Geospatial, qaab blog ah 1,807 ??? 6% + ???
@URISA URISA Ururka Xirfadlayaasha ee GIS 1,721 1,987 2,300 6% + 266 + 313
@orbemapa Orbemapa Blog kula GIS, GPS iyo mawduucyo kale 1,359 1,664 1,816 5% + 305 + 152
@comunidadign IGN Community Meele sare leh oo ay hormarisey Machadka Geological ee Qaranka 1,190 1,418 1,545 4% + 228 + 127
@gim_intl GIM International Juquraafi Geospatial, qaab daabacan 1,042 1,212 1,375 3% + 170 + 163
@pcigeomatics PCI Geomatics Shirkadda Canadian-ka ee ku wajahan barta alaabada fog iyo adeegyada la xidhiidha 995 1,155 1,374 3% + 160 + 219
@ClickGeo Anderson Madeiros Waxyaabo badan oo cusub ayaa ku jira maaddada geospatial, ee ku yaalla Bortuqiis 864 1,090 1,219 3% + 226 + 129
@POBMag Goobta Bilowga Survey of topography iyo cilmiga kale ee la xiriira 790 919 1,023 3% + 129 + 195
@camptocamp_geo CartoCamp Hawlgalkan lala xiriirinayo faafinta OSGeo iyo heerarka 732 828 939 2% + 96 + 111
@revistamapping Khariidadda isdhexgalka Magazine ee kartoonka, GIS iyo dhulka cilmiga dhulka. 694 835 884 2% + 141 + 49
@PortalGeografos Xayeysiinta Geographers Gawaarida beesha Ismaaciil-Maraykanka ee is-weydaarsiga macluumaadka 678 814 903 2% + 136 + 89
@Vector_One Sawirka Weyn Kaalinta Jeff Thurston, oo ah tifaftiraha wargayska vector One 624 688 ??? 2% + 64 + ???
Iyagoo ka jawaabaya codsiga Gloria, kuwani waa xisaabaha uu ina nala weydiisto:
Waxaad egeomates @geofumadas 1,268 iyo 5 bilood ka dib waxaan haystaa 1,514 iyada oo kordhinaysa taageerayaal cusub oo 246 ah oo Twitter ah. 8 bilood ka dib waxaan haystaa 1,829 taageerayaasha, iyadoo kordhinaysa 315. Xaqiiqda ka dib URISA. 18,033 (18,686 Bishii Agoosto) (19,255 bishii Diseembar) Facebook
Cartesia @Cartesia_org 264 iyo 5 bilood ka dib 314 iyadoo kordhinaysa taageerayaasha 50 on Twitter. 8 bilood ka dib ayaa leh 366 raacsanaan, iyadoo la kordhinayo 52.
Franz's blog @franzpc 172 iyo 273 5 bilood ka dib iyadoo kor u kacday taageerayaasha 101 on Twitter. 8 Bisha Hore waxay leeyihiin taageerayaal 365, oo kordhaya 92; Ku dhawaad ​​garaacida Cartesia.
Jadwalka billawgu wuxuu ka tarjumayaa casriga ilaa Maajo ee 2013.
Post Previous«Previous warshadaha 3 New Geospatial
Post Next 4 daqiiqado muhiim ah taariikhda GeofumadasNext »
12 Jawaab ayaa ku soo qoray "15 Twitter xisaabyadooda si ay u raacaan ... sannad ka dib"
Pedro Carrión isagu wuxuu leeyahay:
Aad u fiican, sida muuqata inaad aad uwanaagsan tahay inaad abuurto boosto sidan oo kale ah, waxaan raaci doonaa xisaabaadka, wixii aad samaynayso cusbooneysiin si aad noogu soo cusbooneysiiso.
@JosefinaAymara isagu wuxuu leeyahay:
@JosefinaAymara, waxaan u socdaa todosssss!
Waad ku mahadsantahay aragtida.
Waxaan cusbooneysiiyay 31 ee Agoosto ee 2012
Alberto Parra isagu wuxuu leeyahay:
Xogtaada aad u fiican waa mid aad u fiican oo ka baxsan kuwa caadiga ah, oo xiiso leh in la ogaado cidda ay tahay in ay raacaan twitter-ka.
Ma noqon doonto mid xun haddii aad soo cusbooneysiiso dadka raacsan, xusuuso in dad badan oo xayeysiin ah, laga yaabee kuwa kale inay waayaan.
Dabcan waan cibaadeysanayaa.
Xaaladdan oo kale isticmaalidda amarrada iyo taageerista 'conas pessoais' ee aan raaco, waxaa si cad uga muuqata ama aan ahayn 'mesmo' ka badan kuwa "aqristayaasha" ah. Bem-vindo, umior Study.
Ka muuqatay isagu wuxuu leeyahay:
Ma ahan wax ka badan tirada taageerayaasha waa halbeegga lagu ogaanayo muhiimadda profile, ma aha Twitter, isso é vago. Sida AI dito FOI em caanka top buls- milhares raacsan, assim sida shirkadaha, magac iyo websites, laakiin by isso NEM São elas khuseeya, seja aad, conteúdo GERAM possuem aad uma Boa com os seus relação raacsan run ahaantii muhiim ah
Sidee ahaa xidhiidhka Twitter? Pela sua constância? Pela sua originalidade? Timo mise waa content?
Miyaad dooneysaa inaad dhajiso tirin oo aad u fiirsato in kuwa raacsan 30.000 tem, laakiin 29.000 marka loo eego astaantan qof coisa? Isso não é uma «doorbidid troca»?
É muito, muito vago ayaa go'aamisa muhiimada asaasiga ah ee ku saleysan tirade dadka raacsan. Xeerar taxane ah waa in la qeexaa si loo hubiyo waxa run ahaantii muhiim u ah: ku haboonaanta iyo muhiimadda.
Ma ogtahay waxa websaytka Google ku yaal bogaggaaga?
Waxaan cadeynayaa inaan u adeegsaday tirada dadka raacsan si aan ugu kala sooco hab kala sooca. Haddii aan u sameeyay si ku habboon ... ma fududaan intaas.
Pablog isagu wuxuu leeyahay:
Tirada dadka raacsan ma tiri wax badan. Shirkad ama caanno ayaa leh malaayiin qof oo raacsan, laakiin yaa sheegay in labadaba?
Dad badan ayaan isdifaacin oo isdhex gala kuwa raacsan.
Maxaa loola jeedaa waa habboonaanta iyo muuqaalka si aad u muujisid wax wanaagsan. Tirada dadka raacsan waa dabayl.
Jose Guerrero isagu wuxuu leeyahay:
Web The in ay iga caawiyeen in la eego content, inkastoo shaqaalaha aasaasaha iyo hore ma hayo sida firfircoon, waa:
Waxaan arkay mawduucyo dhowr ah, tusaale ahaan, Cartesiya iyo meesha ay ka jawaabayaan waa kan ugu horreeya. Dhinaca kale, waxaan la shaqeeyaa barnaamijyo bilaash ah (gaar ahaan GRASS-QGIS) iyo Spanishka aad ayay u adag tahay in la helo macluumaad. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan waxaan helay shabakadda:
kaas oo isku xira waxyaabaha ku jira isticmaalka bedelaadaha bilaashka ah.
Luiz Amadeu Coutinho isagu wuxuu leeyahay:
Muito bom. Qaar ka mid ah contas eu não tinha. @geoinformacao
Alaabta guriga isagu wuxuu leeyahay:
Runta waxaan raacaa qaar ka mid ah xisaabyadan, waa inay sidoo kale raacaan kuwa kale.
Gloria Gomez isagu wuxuu leeyahay:
kaalin wanaagsan, laakiin ka mid ah content ugu fiican, waxaan helay in Cartesia, egeomates iyo blog Franz fiicnaan laheyd inay naga caawiyaan la xisaabaadka Twitter ama Facebook iyaga, ma aha haddii aad leedahay taageerayaal badan, laakiin dhab ahaan ay leeyihiin content weyn .